ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိစေတဲ့ နှုတ်ခမ်းအနီရောင်လေးဆိုးမယ်ဆိုရင် သိထားရမယ့်အရာများ | MyStyle Myanmar
ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိစေတဲ့ နှုတ်ခမ်းအနီရောင်လေးဆိုးမယ်ဆိုရင် သိထားရမယ့်အရာများ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပြည့်ဝနေတဲ့ အချိန်မျိုးလည်းရှိနေသင့်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ လှပတဲ့အလှတရားမျိုးနဲ့ နေ့တစ်နေ့ကိုဖြတ်သန်းကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေကတော့ နှုတ်ခမ်းနီအနီရောင်ကို ဆိုးကြည့်ရမှာတောင် တွန့်ဆုတ်နေတတ်ကြပါတယ်။
အနီရောင်နှုတ်ခမ်းတစ်စုံက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ရဲရင့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်လွင်စေပြီး မိန်းကလေးတိုင်းနဲ့လည်း လိုက်ဖက်မှုရှိစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုသိထားရမှာပါ နှုတ်ခမ်းနီကို အနီရောင်ဆိုးတဲ့အခါမှာ သတိထားရမှာကတော့ သပ်ရပ်ပြီးလှပအောင်ဆိုးနိုင်ဖို့က ပိုပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်လိုအဆင့်တွေကို ဖြတ်ကျော်သင့်လဲဆိုတာ ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
အရောင်ရင့်ရင့်နှုတ်ခမ်းနီတွေကို ဆိုးတော့မယ်ဆိုရင် နှုတ်ခမ်းသားလေးချောမွေ့နေစေဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းသားတွေခြောက်သွေ့နေတဲ့အချိန်၊ ကွဲအက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ ဆိုးမယ်ဆိုရင် မလှမပနဲ့ တော်တော်ကိုကြည့်ရဆိုးစေမှာပါ။ ဒါကြောင့် Lip Scrub လေးလုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ သကြားနဲ့ပျားရည်ကိုရောပြီး နှုတ်ခမ်းကိုပွတ်ပေးတာမျိုး၊ သွားတိုက်တံနဲ့နှုတ်ခမ်းကိုပွတ်ပေးတာမျိုးတွေကို ပုံမှန်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းနီအနီရောင်ကို ဆိုးတော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးပြင်ဆင်ရမှာကတော့ Lip Blam ပါ။ Lip Blam ကိုနှုတ်ခမ်းနီမဆိုးခင်အချိန်မှာ လိမ်းထားပေးမယ်ဆိုရင် နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို နူးညံ့ပြီးချောမွေ့နေစေပြီး နှုတ်ခမ်းနီဆိုးရင်လည်း သပ်ရပ်ပြီးလှပနေမှာပါ။ ဒါကြောင့် မိတ်ကပ်တွေစပြီး မလိမ်းခင်အချိန်မှာထဲက Lip Blam ကိုလိမ်းထားပေးလိုက်ပါ။
ကဲ.. နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ တကယ့်အရေးကြီးတဲ့နေရာကို ရောက်လာပါပြီနော်။ နှုတ်ခမ်းနီစပြီးဆိုးတော့မယ်ဆိုရင် ခုနကလိမ်းထားတဲ့ Lip Blam ကို တစ်ရှူးနဲ့ခြောက်သွားအောင် တို့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးရတာပိုပြီး လွယ်ကူမှာပေါ့။
နှုတ်ခမ်းနီဆိုးမယ်ဆိုရင် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးတဲ့ Brush လေးကိုသုံးပေးရင် ပိုလွယ်ကူပြီး တိကျတဲ့နှုတ်ခမ်းသားပုံစံအတိုင်း ရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
Lip Liner Pencil ကလည်း မရှိမဖြစ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ လှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ နှုတ်ခမ်းပုံလေးတွေကို ပုံဖော်ချင်တယ်ဆိုရင် နှုတ်ခမ်းအနားလေးတွေကို Lip Liner နဲ့လိုက်ပြီးတော့ညှိပေးဖို့လိုပါတယ်။
ပြီးသွားရင်တော့ အရောင်ရင့်တဲ့နှုတ်ခမ်းနီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တိကျပြတ်သားမှုရှိပြီး သပ်ရပ်နေဖို့လိုတာကြောင့် နှုတ်ခမ်းဘေးနားမှာ ပေနိုင်လောက်တဲ့နေရာတွေကို Concealer သုံးပြီးပြန်ဖုံးထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ နှုတ်နီဆိုးပြီးသွားရင် ကိုယ်မသိလိုက်တာနဲ့ ရယ်စရာဖြစ်နေမယ့်အရာက သွားမှာနှုတ်ခမ်းနီတွေပေနေတတ်တာပါ။ ဒါကို သတိထားမိဖို့အရမ်းကို လိုအပ်ပါတယ်နော်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ နှုတ်ခမ်းနီအနီရောင်ဆိုးတဲ့အခါမှာ သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေ၊ လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးပြီးဖြစ်တာကြောင့် ပျိုမေတို့အနေနဲ့လည်း မှတ်သားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။
MyStyle Myanmar2019-01-03T18:39:37+06:30January 3rd, 2019|Beauty, နှုတ်ခမ်း – Lips|
အိမ်မှာနေရင်းနဲ့လည်း အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မယ့် လက်သည်းနီဒီဇိုင်းလေးတွေ
သင်အမြဲတမ်း ရွေးချယ်လေ့ရှိတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်က ပြောပြပေးမယ့် သင့်အကြောင်း
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် ရုရှားသူမလေးရဲ့ နာမည်ကျော် ကာတွန်းဇာတ်ကောင်များအဖြစ် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားမှုများ
Vaseline ကိုသင့်မျက်နှာပေါ်မှာ လိမ်းသင့်လား? မလိမ်းသင့်ဘူးလား?
မသန့်ရှင်းတဲ့ Makeup Brush တွေကြောင့် သင့်မျက်နှာမှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ